A na-akpọ eriri eri ụgbọ elu eri ahụ, eriri ezé ya na eri akụkụ anọ, mana eriri dị larịị na-abụkarị eri a na-arụ na ihu ihu nke cylinder ma ọ bụ diski ahụ. The trajectory nke-atụgharị ngwá ọrụ ikwu na workpiece mgbe machining a ụgbọelu eri bụ ...
site ha na 21-01-10
Na ebu n'ichepụta usoro, akpụ akụkụ nke ebu mgbe mkpa ka a na-elu-egbu maramara. Ingmụta nkà na ụzụ polishing nwere ike melite ogo na ndụ ọrụ nke ebu ma si otú a melite ogo ngwaahịa a. Isiokwu a ga-ewebata ụkpụrụ ọrụ na usoro ...
Crankshafts na ọtụtụ-eji na injin. Ka ọ dị ugbu a, ihe ndị eji arụ ọrụ maka igwe ụgbọ ala bụkarị igwe na igwe. N'ihi arụmọrụ dị mma nke ígwè ductile, a na-eme ọgwụgwọ ọgwụgwọ dị iche iche na ọgwụgwọ na-ewusi elu iji melite ike ọgwụgwụ, ike na ...
Machining eri na machining center bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ngwa. N'ime usoro nhazi eri, ogo na arụmọrụ nke igwe ahụ na-emetụta ogo na arụmọrụ nke akụkụ ahụ. N'okpuru anyị ga-ewebata usoro nhazi usoro a na-ejikarị eme ihe n'ezie ...
CNC lathe nhazi egweri ihe ndị bụ isi e ji mara bụ: 1.Gringing ike dị elu. Egweri wheel ikwu na workpiece maka elu-ọsọ adiana, na-emekarị wheel ọsọ apụghị 35m / s, banyere 20 ugboro nkịtị ngwá ọrụ, igwe nwere ike inwe a elu metal mwepụ ọnụego. Na mmepe nke ...
Anti-corrosion n'elu ọgwụgwọ nke fasteners, ọ bara uru ịnakọta!
Ndị na-agba ọsọ bụ ihe ndị a na-ahụkarị na ngwa ọrụ igwe, ọrụ ha dịkwa oke mkpa. Agbanyeghị, corrosion nke ngwa ngwa n'oge eji eme ihe bụ ihe kachasị ama. Iji gbochie corrosion nke fasteners n'oge eji, ọtụtụ Nsukka ga-elu ọgwụgwọ mgbe nke ...
Etu esi ebipu igwe eji eme ihe na igwe?
A na-etinye ígwè siri ike dị iche iche dị iche iche dị iche iche na nchara. Mgbe ọgwụgwọ ọkụ gasịrị, ihe ndị na-ekpo ọkụ na-eme ka ihe ngwọta ahụ sie ike, na usoro ihe owuwu ahụ bụkarịa martensite Ọ nwere nnukwu ike na ịdị ike dị elu, na mmetụta ya siri ike dịkwa elu tha ...
Olee otú Iji melite machining arụpụtaghị ihe?
Nrụpụta ọrụ na-ezo aka oge ole onye ọrụ na-emepụta ngwaahịa tozuru etozu n'otu nkeji ma ọ bụ oge ọ ga-ewe iji mepụta otu ngwaahịa. Asingbawanye arụpụta bụ nsogbu zuru oke. Ọmụmaatụ, rụọ ngwaahịa Ọdịdị imewe, rụọ ọrụ nke ike ike manufacturi ...
Etu ị ga - esi bụrụ Nna-ukwu nke CNC Machine Programming
Maka ndị na-arụ ọrụ igwe, iji melite ikike ọrụ ha dị mkpa iji mụta mmemme igwe CNC. Iji ghọọ onye isi CNC (klaasị ịkụcha ọla), ọ ga-ewe opekata mpe afọ 6 site na ngụsị akwụkwọ nke mahadum. Ọ ga-enwerịrị usoro ọkwa injinia a ...
Gịnị bụ usoro iji gbochie loosening nke bolts n'oge machining?
Dị ka ihe nkedo, a na-eji bolts n'ọtụtụ ebe na akụrụngwa ike, igwe na igwe eletriki na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Bolt ahụ nwere akụkụ abụọ: isi na ịghasa. Okwesiri ikwenye na ukpa iji kwado uzo abuo ya site na oghere. Mkpọchi bụ ndị na-abụghị nke mbughari, ma ha ga-atọhapụ ma ọ bụrụ na ...
Kedu otu esi eme ka usoro nhazi nke igwe ihe eji eme ihe di mfe?
Ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ otu nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe, ọ dị mkpa ijikwa nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ ma nweta uru. Nhazi oge a, enwere akụkụ ise: nhazi atụmatụ, njikwa usoro, nhazi nzukọ, njikwa usoro ...
Olee otú Mbelata nrụrụ na Usoro Nchapu CNC.
N'ihi na elu ngwaahịa mma na nkenke, CNC machining ọtụtụ-eji machining ubi. Usoro nchacha nke CNC, usoro ikpeazụ nke ihe eji arụ ọrụ arụ ọrụ, na-esikarị ike ịmechaa mgbe ihe arụ ọrụ adịghị mma. Ya mere, ọ dị mkpa ịme ihe kwekọrọ ...